Ezinye iivenkile zeApple zinesitokhwe seAirPod Max | Ndisuka mac
Ezinye iivenkile ze-Apple zinesitokhwe se-AirPods Max
Ukuba ungomnye wabo babenenjongo yokuthenga ii-AirPods Max kwaye isitokhwe esisezantsi kwezi sikunikezele, unethamsanqa kwaye kunjalo Okwangoku uninzi lweevenkile zeApple kwilizwe lethu zinesitokhwe ngokwaneleyo imibala ethile. Injalo imeko yeevenkile zeApple ePasseig de Gràcia okanye eMaquinista eBarcelona, ​​zonke iivenkile eMadrid okanye eValencia, phakathi kwezinye.
Esi sitokhwe saneleyo sibonisa ukuba intengiso yokuqala izinzile kwaye ngoku wonke umntu ofuna ukuthenga ii-AirPods Max ezintsha angenza njalo ngaphandle kwengxaki okoko eneVenkile yeApple kufutshane nasekhaya kwaye Ngamanye amaxesha ukuthunyelwa kuthatha iiveki ezi-8-10.
Abasebenzisi abaninzi bayalumkisa ukuba ukunqongophala kwesitokhwe ekuqaleni bekuyingxaki yemveliso kunemfuno ephezulu yezi AirPods Max, oku kunokuba yinyani kuthathelwa ingqalelo intengiso yokuqala exelwe ngabahlalutyi abathile kunye nokwehla kwezi ngokuhamba kweentsuku . Ngokusengqiqweni le asizukuyazi ngokuqinisekileyo kuba iApple ayicacisi amanani entengiso ngokukodwa kwiimveliso zayo, ke ziyidatha esingasokuze siyazi.
Kodwa into ebalulekileyo ngoku kukuba xa unevenkile yeApple kufutshane okanye kufutshane kwaye ungomnye wabo bafuna ukuthenga enye yezi ntloko zentloko kwinkampani yeCupertino, ngoku ungayenza ngoxolo olupheleleyo lwengqondo kwaye ngaphandle kokungxama . Ukuba iivenkile zeApple zikude ... kungcono ulinde okanye ujonge ezinye iindlela kubathengisi abagunyazisiweyo ngamanye amaxesha banokungaphezulu kwesitokhwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ezinye iivenkile ze-Apple zinesitokhwe se-AirPods Max
I-Reuters ithi "iApple Car" iya kungena kwimveliso ngo-2024
Ingeniso yokuthengisa iMac inyuse iipesenti ezingama-50 kwikota ephelileyo